Barakacayaasha Afasyooni “Dowlada waxaan u sheegaynaa Shabaab iyo Xisbul Islaam isma qariyaan waa kuwa banaanada dagaalka u taagay Ordaha oo raadsada oo naga daaya Barakicinta aad nagu haysaan”. | Halganka Online
Barakacayaasha Afasyooni “Dowlada waxaan u sheegaynaa Shabaab iyo Xisbul Islaam isma qariyaan waa kuwa banaanada dagaalka u taagay Ordaha oo raadsada oo naga daaya Barakicinta aad nagu haysaan”.
Barakacayaasha Xerada Afasyooni oo dhibaata aad u xoogan kala kulmayay Maleeshiyaad katirsan Dowlada KMG ah ayaa si saraaxad leh ula hadlay Dowlada KMG ah ah kadib marmarsiiyo katimid dowlada KMG ah.
Mid kamida Haweenka Barakacayaasha ah ee Guryaheeda sida xaq darada ah loo dumiyay ayaa sheegtay in ay xad gudub tahay ficilka ay ku dhaqaaqday Dowlada KMG ah taasina ay muujinayso sida DKG ah ay uga tahay dadka masaakiinta ah.
Haweenaydan waxay waxba kama jiraan ku sheegtay Eedaynta DKMG ah ee ah in Shabaabul Mujaahidiin ku dhuuntaan Xerada Afasyooni si ay u weeraraan xeryaha ciidamada AMISOM ee ku yaal garoonka diyuuradaha Muqdisho.
” Al Shabaab iyo Xisbul Islaam waa kuwa banaanada lataaagan dagaal mana isku qariyaan maatada dhaxdeeda, dowlada kuwa sheeganaya waxaan u sheegaynaa in ay fagaaraha dagaal tagaan oo aysan Burburin guryaheena Ilmaheena ayaa Ilmo ku dhalay Afasyooni ee hanoola daayo xeradan aan deganahay wax dhib ah maanan gaysane”ayay si cara leh u tiri haweenaydaasi.
Hadalkan ay Idaacadaha Muqdisho ka sheegeen Barakacayaasha hantidooda labanaystay ayaa baraarujiyay shacab badan oo banaan yaal u ah dhaca iyo boobka ay ciidanka dowladu ka gaystaan X/weyne,Waaberi iyo madiina iyagoo ku marmarsiyoonaya in Xoogaga Islaamiyiin ah ka dhax dagaalamaan shacabka.
Xoogaga DKMG ah iyo Shisheeyaha kasoo horjeeda ayaa banaanada magaalada la taagan Hubkooda iyagoona dagaallo lagala Dowlada taas oo khilaafsan sheegashada dowlada ee ah in Islaamiyiintu Barakacayaasha isku qariyaan.
Wiil Yar oo 6-sana Jir ah degana meelaha DKMG maamusho ayaa insna sheegay in uu Indhihiisa saaray ciidanka DkMG ah oo derbiga gurigooda uga gambanaya dagaallo culus oo xiligaasi ka socday Wadada Dabka oo ay Islaamiyiintu soo qaadeen “Ciidanka Dowladda marka ay dagaaladu socdaan derbiyada ayay ku qayilaan dagaalkana ma aadaan”.
« Wasiir katirsan Xukuumada Ridada ah oo Xalay ka Badbaaday fal lagu khaarijin lahaa (Faah Faahin). Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ka Jawaabtay War dhawaan kasoo yeeray Hay’adda Musaalaxada ee lasafan Dowladda KMG ah. »